कोबी ब्रायन्टको मुत्यु कसरी हुनेछ ? ८ वर्ष पहिल्यै भएको थियो भविष्यवाणी ! – Khabar Silo
काठमाडौं। विश्वका चर्चित र महान बास्केटबल खेलाडी कोबी ब्रायन्टको २६ जनवरी २०२० मा एक हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भयो । उनको निधनप्रति विश्वभरीबाट दुःख प्रकट गरिएको छ । यससँगै अहिले उनको मृत्युको भविष्यवाणीको विषय चर्चामा छ । ८ वर्ष पहिल्यै उनको मृत्युको भविष्यवाणी भएको थियो । भविष्यवाणीमा उनको मृत्यु हेलिकप्टर दुर्घटनामा हुने किटान गरिएको थियो ।
डटनोसो (@dotNoso) नामका ट्वीटर प्रयोगकर्ताले १४ नोभेम्बर २०१२ मै यो कुराको भविष्यवाणी गरिदिएका थिए कि कोबी ब्रायन्टको मृत्यु हेलिकप्टर दुर्घटनामा हुनेछ । भविष्यवाणी सत्य भएपछि अहिले ८ वर्ष पुरानो त्यो ट्वीट भाइरल भइरहेको छ । यी ट्वीटर युजरको भविष्यवाणी सत्य भएपछि अहिले मानिसहरु ट्वीटरमा उनलाई ट्याग गरेर आफ्नो जीवनका धेरै कुराहरु सोधेका छन् । कैयौंले यस विषयमा मिम पनि बनाएका छन् ।
४१ वर्षका कोबी ब्रायन्टको निधन अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा हेलिकप्टर दुर्घटनामा भएको थियो । कोबी जुन हेलिकप्टरमा थिए त्यसमा उनकी १३ वर्षकी छोरी पनि थिइन् । कोबीको निधनपछि उनका फ्यानहरु शोकाकुल छन् । उनलाई बास्केटबलका जादूगर पनि भनिन्थ्यो । उनले रेकर्ड कमाइको साथमा बास्केटबलबाट सन्यास लिएका थिए । करिअरमा उनले कैयौं रेकर्ड आफ्नो नाममा बनाए ।
सिरी ‘ए’ को सबैभन्दा दोस्रो छिटो खेलाडी रोनाल्डो !
२२ भदौ युभेन्टसका स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इटालियन सिरी ‘ए’ का सबैभन्दा दोस्रो छिटो खेलाडी बनेका छन् अघिल्लो सिजन मात्र स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडबाट युभेन्टस गएका पोर्चुगलका कप्तान रोनाल्डो सिरी ‘ए’ को दोस्रो छिटो खेलाडी बनेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले जनाएका छन् इटालीको मिडिया ‘ला गजेट्टो डेल्लो स्पोर्ट्स’को रिपोर्टअनुसार सन् २०१८ मा सिरी ‘ए’ च्याम्पियन क्लब युभेन्टस […]
साम्बा भन्छिन्– नेपाल साफको उत्कृष्ट टिम भएपछि मात्र मेरा रेकर्डको अर्थ हुन्छ
Posted on June 1, 2020 June 1, 2020 Author khabar silo
सावित्रा भण्डारी नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी स्ट्राइकर हुन्। सावित्रा फुटलबमा ‘साम्बा’ नामले पनि चिनिन्छिन्। नेपालका लागि सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय गोलकर्ताको रेकर्ड बनाएकी उनले ३८ खेलमा ३४ गोल गरिसकेका छन्। उनी अहिले दक्षिण एसियाकी उत्कृष्ट महिला स्ट्राइकरको रुपमा चिनिन्छिन्। अघिल्लो साता २३ वर्ष पूरा भएकी सावित्राको करिअरबारे विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले फिचर तयार पारेको छ। […]
आसन्न दक्षिण एसियाली खेलकुद साग र सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल प्रतियोगिताको तयारीमा रहेको नेपाली महिला भलिबल टिमले थाइल्याण्डमा पहिलो हार ब्यहोरेको छ । थाइल्याण्डको बैंककमा भएको खेलमा नेपाली महिला टिम थाइल्याण्डकाे यू–२३ टिमसँग तीन-शून्यको सोझो सेटमा पराजित भयो । यसअघिका दुई खेलमा जित निकालेको नेपाली महिला टिमले मंगलबार भने सुरुदेखि नै फितलो प्रदर्शन गर्‍याे । […]
अमेरिकामा बसोबास गरिरहेकी रानी शाक्य र कमल खत्रीले भ्यालेन्टाइन डेको अवसर पारेरप्रेमिल गीत ल्याउँदै